Sombane - China Shandong Huaxin Electric zomlilo
Transformer 1.Distribution transformer: Oli badl 'distribution sombane kunye 2.Characteristics sombane zombane: Ukusebenza badl' oli-sombane ontlantlu-ntathu zingqinelane umgangatho GB 1994-1996 "Amandla sombane" kunye GB / T6451-2008 "Technical Ipharamitha kunye neemfuno phase-ezintathu Ioli-shi Amandla transformer ". Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu zokuhambisa umbane kunye nokusasazwa kothungelwano amandla ezoshishino lwezolimo. Oluphambili intsimbi yenziwe ngengqele esemgangathweni -...
Oyile shi distribution sombane kunye sombane sombane
Ukusebenza kwe badl 'oli-sombane ontlantlu-ntathu zingqinelane umgangatho GB 1994-1996 "Amandla transformer" kunye GB / T6451-2008 "Technical Ipharamitha kunye neemfuno Three-phase Ioli-shi Amandla transformer".
Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu zokuhambisa umbane kunye nokusasazwa kothungelwano amandla ezoshishino lwezolimo.
Oluphambili intsimbi yenziwe oxwebhu lesilicon sentsimbi kwizinga abandayo -rolled, kwaye coil wenziwe umgangatho ioksijini-ezamahala nobhedu, ezinomfanekiso Outlook elungileyo kunye nokubaleka ekhuselekileyo.
Intsimbi olungundoqo yenziwe oxwebhu lesilicon-intsimbi ebandayo-ezityikitywe kunye Uhanjiso eliphezulu ubutsalane kwaye lamkela isakhiwo okuwisa-iplanga, kangangokuba indlela yayo ngemagnethi kufutshane, iilahleko kunye izinga lengxolo iphantsi;
wire compress Iwendawo ngokubhijela ngoko ilahleko ephantsi ube nekhono elungileyo ukumelana elifutshane-yesekethe;
inxalenye yawo esebenzayo igqiba indlela ekhethekileyo ngokucinezelwa obuya kuqinisekisa uxinzelelo yezihlunu ithembekile;
Itanki neoli uhlobo intsimbi kunye isakhiwo uhlobo ngokupheleleyo esityeni yokukhwabusha, nokuba aqinise ezibalaseleyo lula yolondolozo
Ukuthembeka: All in-service mveliso kuba akukho umonakalo okanye oli ukuvuza yenzekile;
Itanki Oli ngeentlobo ngeentlobo isakhiwo kunye nenkangeleko entle.
Previous: Resistance zomlilo
Next: Amanzi okupholisa System (Tower)